Amafutha we-Hemp angakhishwa ezingxenyeni ezahlukahlukene zesitshalo se-hemp futhi anezinto zokwelapha, ubuhle, zokwelapha nezimboni.
Amafutha Wembewu Ye-hemp Vs Amafutha We-CBD Hemp
Imbewu ye-cannabis sativa (hemp) isetshenziswa emhlabeni wonke ngenxa yokuqukethwe kwayo okuphezulu kwezakhi futhi imithetho eqinile ikhona ukuze kukhawulwe inani le-psychoactive cannabinoid tetrahydrocannabinol (THC). E-Canada, lo mkhawulo ungama-10 ppm ngegremu yembewu ye-hemp namanye amazwe afana neNingizimu Afrika alandela imihlahlandlela efanayo yezinga le-THC ku-hemp. I-USA ivumela amaphesenti angama-0.3 we-THC kwimikhiqizo ye-hemp.
Amafutha embewu ye-Hemp asuselwa ezinhlanyelweni futhi angaqukatha amanani we-phytocannabinoids anjenge-CBD. Amafutha embewu ye-Hemp ayacindezelwa kubanda ukuze akhiqize uwoyela oluhlaza odliwayo ngokunambitheka okufana nokwamaznuts noma imbewu yejongilanga.
Amafutha acebile ngama-acid amaningi a-poly-unsaturated fatty anjenge-omega-6 ne-omega-3 kanye ne-Vitamin E. Isilinganiso se-omega-6 kuya ku-omega-3 emafutheni embewu ye-hemp imvama phakathi kuka-2:1 no-3:1 elilungele impilo yabantu.
Amafutha akhipha i-CBD hemp enziwa ngezimbali, umhlanga namaqabunga esitshalo se-hemp. Lezi zingxenye zemifino ziqukethe ama-phytocannabinoids azuzisayo lapho i-CBD ibaluleke kakhulu. I-CBD yiyona phytocannabinoid eyaziwa kakhulu nge-psychoactive, nokho yinye kuphela yama-cannabinoids amaningi akhona ku-hemp.
Inhloso enkulu yokusebenzisa i-CBD hemp uwoyela ukubuyisa ibhalansi yamakhemikhali emzimbeni ngokuvuselela uhlelo lwe-endocannabinoid lomuntu. Izinzuzo kawoyela we-CBD azibangelwa i-CBD kuphela kepha zibuye zithuthukiswe ukusebenza ngokubambisana kwamanye ama-cannabinoids akhona emafutheni njengama-terpenes namanye ama-phytochemicals. Lo mphumela ohlanganisiwe, onamandla kunomphumela we-CBD kuphela, waziwa ngokuthi yi-'ent effect'.
Ukusetshenziswa Kwama-Hemp Oils
Amafutha embewu ye-Hemp awubuthakathaka kakhulu ukuthi angawusebenzisa ngokushisa ngoba azobhubhisa lawo ma-acid anenzuzo kodwa alungele imayonnaise, i-pesto noma njengamafutha okugqoka. Amafutha we-Hemp agcinwa kahle epholile, futhi uma evuliwe, kumele asetshenziswe ezinyangeni ezintathu.
Isetjenziswa emikhiqizweni ye-skincare, i-hemp yembewu ye-hemp iqukethe ama-antioxidants futhi iyi-anti-inflammatory enamandla esiza ukwelapha i-acne, ama-rashes, eczema kanye ne-psoriasis. Ilungele isikhumba esizwele. Izifundo eFinland zabonisa ukuthuthuka kwe-eczema nasemandleni ezinwele nasezipikili zeziguli ezisebenzisa uwoyela wembewu ye-hemp nsuku zonke.
Ukucindezela kwesibili kwembewu ye-hemp kuzothela uwoyela onombala onsundu. Amafutha lawo asetshenziswa kuma-varnish, njengamafutha omisa ngopende, nangamafutha esibani. Ukubekwa phansi kwepulasitiki okufana ne-linoleum nophethiloli we-diesel ongenawo ubuthi kwenziwa emafutheni embewu ye-hemp.
I-CBD hemp ekhipha i-oyili (etholakala emaqabungeni, izimbali kanye nesiqu) ingasetshenziselwa izimo ezahlukahlukene, kufaka phakathi i-skincare kanye nokwelapha uhla lwezimo zokwelashwa.
Ubufakazi obunamandla besayensi bokusetshenziswa kwe-CBD emafutheni e-hemp kwelokwelapha isithuthwane ezinganeni. I-CBD ibuye ibhekane nokukhathazeka nokuqwasha kanye nobuhlungu obungapheli obuhambisana nokuvuvukala.
Amafutha e-CBD afakwa emikhiqizweni efana namaswidi ezinsini, ama-lollipops, ukuphathwa kwezilwane namaconsi, i-vaping oil, tinctures kanye nezifafaza zomlomo. Ingadonswa esikhunjeni noma ithathwe ngaphakathi.
Ucwaningo olwenziwe yiNyuvesi yaseNottingham luphethe ngokuthi ukudla okuthile okunamafutha amaningi kungakhuphula ukutholakala kwe-CBD kawoyela we-hemp. Ukhukhunathi, umnqumo, u-soya kanye no-sesame uwoyela, kanye nenhlanzi, inyama, ukwatapheya kanye namaqanda, kuzovumela umzimba womuntu ukuthi ungenise i-CBD eningi.